काठमाडौं । इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा आवद्ध भएको छ । बैंकले विद्युतीय चेक क्लियरिङ्ग प्रणाली र अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीसेवा सम्बन्धि क्लियरिङ्ग हाउससँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा क्लियरिङ्ग हाउसको..
नागरिक लगानीकोषले २२ प्रतिशत बोनश शेयर दिने
काठमाडौं । नागरिक लगानीकोषले गतआर्थिक वर्षको नाफाबाट वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कोषको फागुन २८ गते बसेको संचालक समितिको बैंठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई २३.१६ प्रतिशत लाभांश..
नबिल बैंकको साधारणसभाबाट ३४ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । नबिल बैंकको फागुन २७ गते सम्पन्न ३४ औं वार्षिक साधारण सभाले ३४ प्रतिशत लाभांश परित गरेको छ । साथै बैंकले दश प्रतिशत संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्ने..
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले जेविल्स फाइनान्सलाई एक्वायर गर्ने
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले जेविल्स फाइनान्सलाई एक्वायर गर्ने भएको छ। बैंक तथा फाइनान्सका बीचमा अक्वायर गर्ने सम्बन्धमा आइतबार साँझ सम्झौता भएको हो। सम्झौता भएसँगै जेविल्स फाइनान्सको शेयर कारोबार रोक्का भएको..
जापानस्थित क्योदाइ रेमिट्यान्सबाट रकम पठाउँदा पाँच लाखको निशुल्क बीमा हुने
काठमाडौं । जापानस्थित क्योदाइ रेमिट्यान्स आइएमईले ‘तपाईंको कमाइ, परिवारको सुरक्षा सँगसँगै’ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ सेवाग्राहीका लागि दुर्घटना जीवन बीमा योजना ल्याएको छ। योजना अन्तर्गत सेवाग्राहीले जापानबाट क्योदाइ रेमिट्यान्समार्फत परिवारका सदस्य वा..
अब अनलाइनबाटै बीमा शुल्क तिर्न सकिने, मेट–लाइफ र ईसेवाबिच सम्झौता
काठमाडौं । नेपालको पहिलो पेमेन्ट गेटवे इसेवा मार्फत अबदेखि अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स् कम्पनी, मेट–लाइफको प्रिमियम भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । इसेवाबाट विभिन्न ८ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीको पनि प्रिमियम भुक्तानी..
नबिल बैंकले डेढ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण ५ दिनमै दिने, व्याज १० प्रतिशत
काठमाडौं । नबिल बैंकले साना तथा मझौला उद्यमीका लागि 'नबिल सरल कर्जा' योजना ल्याएको छ। यस योजनामा साना तथा मझौला किसिमका उद्यमीले सहजै सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने बैंकका प्रमुख कार्यकारी..
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र माछापुच्छ्रे बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र माछापुच्छ्रे बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा इन्स्योरेन्सका सहायक महाप्रबन्धक आशिषसिंह र बैंकका उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले हस्ताक्षर गरे। सम्झौता पछि बैंकका ग्राहकले बैंकको कुनै..
सिटिजन्स बैंकको १ लाखको उपचार र ७ लाखको दुर्घटना बीमासहितको बचत खाता सञ्चालनमा
काठमाडौं। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले नयाँ बचत योजना “सिटिजन्स विशेष बचत खाता” सञ्चालनमा ल्याएको छ। एक सय रुपैयाँमा खोल्न सकियो यो खाता कर्मचारीको तलवका लागि उपयोगी हुने बैंकले जनाएको छ। यसमा दैनिक..
२० अर्ब पुँजी भएको इन्फ्रास्टकर बैंकले भोलिदेखि औपचारिक कारोबार गर्ने
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक बुधबारबाट औपचारीक रुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । माघ २९ मा राष्ट्रि बैंकबाट राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत पाएको थियो । उक्त..
रवीन्द्र अधिकारीकी पत्नीलाई एलआईसी नेपालले १२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ दियो बीमा बापत
काठमाडौं । दिवंगत पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीकी पत्नी विद्या भट्टराईलाई लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल (एलआईसी) लिमिटेडले बीमा दावी रकम हस्तान्तरण गरेको छ । गत बुधबार ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर निधन भएका..
नेपाल लाइफले २५ प्रतिशत बोनस र २३.५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले लागनीकर्ताहरुलाई ४८.५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । इन्स्योरेन्सले लगानीकर्ताहरुलाई २५ प्रतिशत बोनस र २३.५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने जनाएको छ । इन्स्योरेन्सको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको..
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सिटिजन बार्षिक अग्रिम भुक्तानी जीवन बीमा नामक नयाँ योजना नेपालीहरु माझ प्रस्तुत गरेको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न एक कार्यक्रममार्फत सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत..
भोलीदेखि ग्लोबल आईएमईको डिवेन्चर, २५ कित्तादेखि ७५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको ऋणपत्र बुधवार (फागुन १५) देखि विक्रीमा आउँदै छ । बैंकले १५ लाख कित्ता ऋणपत्र विक्रीमा ल्याएको हो । जसमध्ये बैंकले १२ लाख कित्ता निजी संस्थान..
काठमाडौं । नबिल बैंकलाई नेप्सेले कारबाही गरेको छ । नेप्सेलाई उपलब्ध गराउने पर्ने सूचना समय मै उपलब्ध नगराएको भन्दै बैंकलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेको हो । सूचिकरण विनियमावली उल्लंघन..
कास्की । कृषि विकास बैंकले सहूलियतपूर्ण कर्जामा विनाधितो ऋण लगानी गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश र कृषि विकास बैंक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा भएको..
काठमाडौं । ग्लोबल फाइनान्सले गरेको अध्ययनमा चिनियाँ बैंकहरुले नै विश्वको उत्कृष्ट बैंकको सूचीमा परेका छन् । इन्डस्ट्रियल एण्ड कमर्शियल बैंक अफ चाइना नै सर्वोत्कृष्ट बैंकको रुपमा ठहरिएको छ । सो..
लघुवित्त क्षेत्र पनि मर्जरमा, साधना लघुवित्तले आर्थिक सम्बृद्धिलाई प्राप्ति गर्ने
काठमाडौं । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक सम्बृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्ने भएको छ । १० जिल्ला कार्यक्षेत्रको रुपमा गोरखा जिल्लामा कैन्द्रिय कार्यलय भई कारोवार गर्दै आएको साधना लघुवित्त वित्तीय..
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले भक्तपुर जिल्लाको बोडे, काभ्रेको बनेपा तथा काठमाण्डौका साखुँ, बलम्बु र कीर्तिपुरमा गरि एकै दिन पाँच नयाँ शाखा औपचौरिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नं..
एनआईसी एशिया बैंकले पोखरा पावर हाउस चोकमा शाखा खोल्यो
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले पोखरा महानगरपालिका वडा नं २९, पावरहाउस चोक स्थित पावर हाउस चोकमा शाखा खोलेको छ । एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कर्जा अधिकृत प्रकाश बरालले शाखाको उद्घाटन गरे..
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र महालक्ष्मीलाईफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता भएको छ । महालक्ष्मी लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराईले बैंककोको प्रधान कार्यालय दरबारमार्गमा आयोजित एक समारोहका बीच बैंकासुरेन्सको सम्झौता..
’स्मार्ट छोरी’ अभियान सुरु, १० हजार किशोरीलाई साक्षरता दिने, कसरी सहभागी हुने ?
काठमाडौं । दस हजार किशोरी र महिलाहरुलाई डिजिटल तथा वित्तिय साक्षरता प्रदान गर्ने उद्धेश्यका साथ खल्ती डिजिटल वालेटले आजदेखि स्मार्ट छोरी अभियान सुरु गरेको छ । देशव्यापी रुपमा संचालित यस..
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चिडियाखानालाई ५० लाख रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चिडियाखानामा शैक्षिक श्रव्यदृष्य केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गर्ने भएको छ । बैंकले प्राकृतिक संरक्षण कोषलाई ‘फिल्ड मार्शल सर जोन च्यापल शैक्षिक केन्द्र’ स्थापन गर्न ५० लाख..
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले आसमान नेपाललाई आर्थिक सहयोग दिएको छ । बैंकको केन्द्रीय कार्यालय कार्यालय नारायणहिटी पथमा आयोजित कार्यक्रममा १ लाख रुपैयाँको चेक आसमान नेपाललाई बैंकले हस्तान्तरण गरेको छ । आसमान नेपालले..
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड र लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेडबीच सोमवार बैंकान्स्योरेन्स सम्बन्धी सेवा आदानप्रदान गर्ने गरि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता अनुसार अब बैंकका ग्राहकले मुलुकभर..
काठमाडौं । हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डु ले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काउन्टर ग्यारेन्टी वापतको भुक्तानी रकम पाउने भएका छन्। चीनको न्यायालयले मुद्दाको सुनुवाई गर्दै रकम फिर्ता गर्न चाइना कन्स्ट्रक्सनलाई..
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच आज बैंकान्स्योरेन्स सम्बन्धी सेवा आदान प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार अब यस बैंकका ग्राहकहरुले मुलुकभर फैलिएको..
एनएमबि बैंकले भित्र्यायो डेढ करोड डलर वैदेशिक ऋण
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले विदेशी संस्था सिडिसी ग्रुपबाट ऋण भित्र्याएको छ। बैंकले १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर कर्जा लिन सफल भएको हो। राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बैंकले सिडिसी..
उत्कृष्ट म्यानेजर अवार्ड आइएमईका सिइओ सुमन पोखरेललाई
काठमाडौं । नेपाल व्यवस्थापन संघले आइएमर्इका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेललाई वर्षकै उत्कृष्ट म्यानेजर अवार्ड प्रदान गरेको छ। वर्षभर संस्थाको नेतृत्व गर्दा देखाएको कौशलता, परिणामका आधारबाट अवार्ड दिइएको संघले जानकारी दिएको..
सिभिल बैंकको ६ महिनाको खुद नाफा करिब ५० प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । सिभिल बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्ष यसै अवधिको तुलनामा बैंकको खुद नाफा ११ करोड ९५..
Results 1896: You are at page7of 64